Mogadishu Journal » 2018 » April » 1
Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay sare u qaadista daqligii soo galay 3dii bilood ee la soo dhaafay
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre ayaa kormeer shaqo iyo bogaadin ku tagay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Dalka, kadib guul ay Wasaaraddu ka soo hooysay dakhliga gudaha Saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda...
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay wafdi ka socda QM iyo midowga Africa
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si wadajir ah u qaabilay Guddiga Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika u qaabilsan dhaqaale u raadinta ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo...
Al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM ku leeyihiin Shabeellaha Hoose
Mjournal :-Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday saldhig Ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada Buulo Mareer ee Gobolka Shabeellaha Hoose. Sida ay sheegayaan wararka qaraxyo xooggan oo loo maleynayo inay ahaayeen gaari waxyaabaha qarxa laga...
Howlgal Miino baaris ah oo ka socda wadada Maka Al-Mukarama
Mjournal :-Sida ay sheegayaan Wararka naga soo gaaraya wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho, Ciidamada Booliska qaybtooda u tababaran Baarista Miinooyinka, ayaa maanta lagu soo daadiyay halkaasi oo ay ku baarayaan gaadiidka. Howlgalka Miino Baarista ah ayaa waxaa uu ka...
Ciidamadii ku sugnaa xarunta Golaha Shacabka oo laga qaaday
Mjournal :-Wararka laga helayo xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ayaa sheegaya in ciidankii horay u joogay xaruntaas dib loogu soo celiyay, labo todobaad kaddib markii ciidamo ay dirtay Xukuumadda ay la wareegeen xaruntaas. Ciidamada Booliska ee gaarka u tababaran oo...
Mjournal : -Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka Magaalada Muqdisho, waxaana uu halkaasi kula kulmay Saraakiisha ciidamada. Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa ku wehlinaayay maamulka gobolka Banaadir iyo...
Xafiiska Guddoomiye Jawaari oo laga soo saaray qoraal Beenin ah (Akhriso)
Mjournal :-Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa laga soo saaray qoraal deg deg oo beenin ah, kaasoo ku saabsan warar lala wareegayo oo sheegaya inuu is casilayo. Qoraalka oo uu ku saxiixnaa Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka ayaa waxba kama...